XOG: Rekoodhadii & Xaqiiooyinkii Laga Diwaan Galiyay Kulankii Anfield Ee Liverpool & Tottenham - Gool24.Net
XOG: Rekoodhadii & Xaqiiooyinkii Laga Diwaan Galiyay Kulankii Anfield Ee Liverpool & Tottenham
Liverpool ayaa sii joogtaysay rekoodh khaas ah oo ay ku leedahay garoonkeeda Anfield iyada oo barbaraysay xog hore loogu diwaan galiyay kooxda ay Premier League ku tartamayaan ee Manchester City laakiin Liverpool ayaa hal kulan oo kale u baahan si ay Anfield guuldaro la’aan ugaga jirto si ay Man City u dhaafi karto.
Liverpool ayaa rekoodho iyo xog khaas ah looga diwaan galiyay kulankii Anfield ee ay guusha ka gaadhay Tottenham, waana xog uu aad u jeclaysan doono Jurgen Klopp isla markaana ay jamaahiirta Reds si wayn ugu raaxaysanayan.
Haddaba waxaanu halkan idiinku soo koobnay waxyaabihii ugu muhiimsana ee laga diwaan galiyay kulankii Liverpool iyo Tottenham halkan ayaanad kaga bogan kartaa.
⇒Liverpool ayaa sii dheeraysatay rekoodhka guuldaro la’aanta garoonkeeda Anfield ee Premier league, waxayna gaadhsiisay 37 kulan oo xidhiidh ah oo ayna guuldaro ku soo gaadhin, waxayna soo barbaraysay rekoodhkii ay Man City hore 37 kulan oo guuldaro la’aan ah uga samaysay Etihad Stadium laakiin wali Chelsea ayaa ah kooxda abid rekoodhka ugu dheer ee guuldaro la’aanta garoonkeeda ku haysata 86 kulan kaas oo ahaa rekoodh ay Liverpool joojisay sanadkii 2008 kii.
⇒Liverpool ayaa gaadhay dhibcihii abid ugu badnaa ee ay horyaalka Premier league ka heshay marka la ciyaaro 32 kulan waxayna dhaaftay 76 dhibcood oo ay samayay xili ciyaareedkii 1987/88, waana rekoodh uu ku suntanaan doono Jurgen Klopp.
⇒Tottenham ayaa guuldaraysatay kulankeedii 17 aad ee Premier League ah oo ay Anfield soo booqatay ee kadib 27 kii kulan ee ay Reds martida u noqotay, waxayna kaga liidataa oo kalaya Old Trafford oo ay 21 guuldaro ku soo gaadheen.
⇒Liverpool ayaa saddex jeer dhalisay goolasha guusha marka ay ciyaartu soo gaadho 90 daqiiqo ama kadib intii lagu jiray xili ciyaareedkan waana markii labaad ee ugu badnayd ee ay hal xili ciyaareedkan heerkan gaadhaan waxaana ka horaysay 2008/09 kii oo ay afar jeer ku guulaysteen goolasha waqtiga dhimashada ee dhamaadka ciyaarta.
⇒Christian Eriksen ayaa noqday ciyaartoygii labaad oo kaliya ee afar xili ciyaareed oo xidhiidh ah sameeyay 10 gool caawin ama ka badan waxaana ka horeeyay oo kaliya David Beckham oo Man United u sameeyay muddadii u dhexaysay 1997/98 ilaa 2000/01.
⇒Andrew Robertson ayaa noqday difaaca xili ciyaareedkan ugu gool caawinta badan Premier league wuxuuna sameeyay 9 gool caawinood wuxuuna la mid yahay xidigaha khadka dhexe ee Paul Pogba iyo Raheem Sterling.